တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prak Sokhonn တို့ တရုတ်နိုင်ငံ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး - Xinhua News Agency
ဟန်ကျိုး၊ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prak Sokhonn နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် Anji မြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ဝမ်ရိက တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေ နှင့် ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အရ ကာကွယ်ဆေးပံ့ပိုးမှုအပိုင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ ကာကွယ်ဆေးပုလင်းဖြည့်စက်ရုံတစ်ရုံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝမ်ရိ သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် Anji မြို့၌ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prak Sokhonn အား လက်ခံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့်အတူ အမြန်လမ်းမများ နှင့် လေဆိပ်များ တည်ဆောက်ရေး ၊ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံကိန်းများပိုမိုဖော်ဆောင်ရေး ကဲ့သို့သော အဓိက စီမံကိန်းများတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ တိုးချဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sokhonn က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ထောက်ပံ့ကူညီပေးမှုအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံကအဆိုပြုသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အချက်အလက်လုံခြုံမှု တစ်ခု ဖော်ဆောင်ရေး နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖော်ဆောင်ရေး တို့၏ အလွန် အရေးပါပုံကို ထောက်ခံအားပေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Sokhonn က ပေကျင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် အိုလံပစ်ဆောင်းရာသီအားကစားပွဲတော်များ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါကြောင်း နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံအကြား လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းစေရန် စိတ်ဆန္ဒရှိကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် တရုတ်-အာဆီယံဆက်ဆံရေး လက်တွဲမှု တိုးမြှင့်ရေးအပေါ် သဘောထားအမြင်များကို အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
HANGZHOU, Dec.4(Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Saturday held talks with Cambodian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Prak Sokhonn in Anji in east China’s Zhejiang Province.
Wang said China, as Cambodia’s friend and comprehensive strategic partner, will continue to provide vaccine assistance according to Cambodia’s needs and help Cambodia buildavaccine filling factory.
Sokhonn appreciated China for supporting Cambodia’s fight against COVID-19 epidemic. Cambodia attaches great importance to and supports the Global Development Initiative andaglobal data security initiative proposed by China.
Photo – (1/2)Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi holds talks with Cambodian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Prak Sokhonn in Anji, east China’s Zhejiang Province, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Jiang Han)